आहा ! रारा गोल्डकप माघ ९ बाट, विजेतालाई ७ लाख, दर्शकलाई स्कुटर - NepaliGoal.com
बिहिवार , 18 अक्टोबर 2018
Home » राष्ट्रिय फुटबल » आहा ! रारा गोल्डकप माघ ९ बाट, विजेतालाई ७ लाख, दर्शकलाई स्कुटर
आहा ! रारा गोल्डकप माघ ९ बाट, विजेतालाई ७ लाख, दर्शकलाई स्कुटर
Milan Shahi जनवरी 9, 2018 राष्ट्रिय फुटबल Leaveacomment 379 Views
पोखरा २५ पुस । मोफसलको प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता माघ ९ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । २० गतेसम्म पोखरा रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा तीन विभागियसहित १२ टिमले प्रतिष्पर्धा गर्ने छन् । नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एपिएफ क्लबसँगै ए डिभिजन क्लबहरु मनाङ मस्र्याङ्दी, थ्रीस्टारले खेल्नेनछन् ।
मोफसलको झापा ११, धरान फुटबल क्लब, सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्टिङ क्लब धनगढी छन् भने विदेशी टिममा उत्तर बरिन्धरा क्लब बंगलादेश र युनाइटेड सिक्किम छन् भने आयोजक सहारा क्लबले सहभागिता जनाउने छ ।
बंगलादेशको ए डिभिजन क्लब भएको र विदेशीका साथै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीसमेत भएकाले बंगलादेशी टोली बलियो आउनेसहारा क्लबका अध्यक्ष केशबबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको प्रथम र द्वितीय पुरस्कारको राशी बृद्धि भएको छ । प्रथम पुरस्कारमा २ लाख बृद्धि गरेर ७ लाख १ हजार र द्वितीय पुरस्कारमा १ लाख बृद्धि गरेर ३ लाख ५१ हजार पुर्‍याइएको हो ।
गतवर्ष प्रथम पुरस्कारको राशी ५ लाख १ हजार र द्वितीय पुरस्कारको राशी २ लाख ५१ हजार थियो । टिकट काटेर फुटवल हेर्न गएका दर्शक मध्ये लक्की ड्रबाट बिजेता बनेका एक जनालाई एउटा स्कुटर र अर्का एक जनालाई एलजी टिभी प्रदान गरिने आयोजक सहारा क्लवले जनाएको छ ।
सहारा क्लवले विगत १६ वर्षदेखि प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकम सहारा एकेडेमीमा रहेका वालकहरुको भरण पोषणमा खर्चिदै आएको छ । हाल एकेडेमीमा १६ जिल्लाका २८ जना बालकहरु आश्रति रहेको क्लबका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
Tags आहा ! रारा गोल्डकप
Previous १४ महिनापछि फुटवलमा फर्किएको थ्री स्टारको उत्कृष्ट पुनरागमन, जित्यो झापा लाई
Next भुटानको डुकस्टारलाई हराउँदै रुपन्देही ११ सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको क्वाटरफाईनलमा